NeoWars dia RTS miorina amin'ny node izay mitondra anao any amin'ny habakabaka | Androidsis
Te-ho afaka aho miresaka momba ny RTS bebe kokoa isaky ny fotoana kely kokoa, fa ny fotoana farany nandalovany teto dia ny iray manamarika dia Taonan'ireo fanjakana: tontolon'ny fanjanahana. Ity dia karazana iray izay toa nijanona ary angamba noho ny filàna hanana fitaovana tsara kokoa ka indray andro any hiresaka momba ny iray izay mitovy amin'ny Starcraft II lehibe na ilay Comand sy Conquer franchise avy amin'ny EA Games isika. Amin'izao fotoana izao dia milamina amin'ireo lalao video RTS vaovao mivoaka isam-bolana vitsivitsy izahay ary antenaina fa tsy ho ela dia afaka milaza isika fa niova ihany tamin'ny farany.
Vaovao iray hankafizanao ny NeoWars. Node-basedTsy maintsy mianatra mitantana loharano tsara ianao ary mamorona ny fototry ny asanao eo ambonin'ny planeta fahavalo amin'ny faritra samihafa amin'ny galaxy. RTS iray miantsona amin'ny lohahevitry ny siansa foronina ary hahafahantsika mahazo ny fitambaranay hahazoana loharanom-bola betsaka indrindra hanitarana izany fototra izany ka tena ilaina mba handresena ny mifanohitra amin'izay. Lalao izay hiatrehantsika ny AI amin'ny fahavalo telo farafahakeliny, noho izany dia nalamina ho fifandonana mahaliana izay tsy maintsy hampiasainay ny teknikanay nianarana nandritra ny taona maro tamin'ity karazana lalao video ity.
1 Raiso ny andraikitry ny komandà
2 Fototra hananganana
Raiso ny andraikitry ny komandà
Ao amin'ny NeoWars dia mila mandray ianao ny andraikitra lehibe tiana holazaina amin'ny hoe komandà Tsy maintsy hidina ambonin'ny velaran'ny planeta ianao ary hanangona ny loharano mba hanombohana ny fananganana ny fotonao. Tsy maintsy jerenao amin'ny fotoana rehetra fa ao anaty lalao video RTS mifototra amin'ny node isika, izay midika fa tsy maintsy hihazonana ny fizarana ireo tambajotram-pifandraisana hivoatra hatrany ianao hahazoana ny fahombiazana tsara indrindra, indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny loharano.
Ary izany dia ao amin'ilay fivoriana, izay hiatrehanao ny mpanohitra fahavalo telo Hataony sarotra aminao araka izay azony atao ny mandray ny fanapahana na fiarovana ny planeta. Ny planeta tsirairay dia samy manana ny paikadiny, ny tontolo iainany, ny mampiavaka azy ary ny endrika hafa amin'ny fomba fanangonana loharano. Tsy maintsy mifanaraka amin'ny paikadiny tsirairay ianao ary na dia tsy hahatratra ny manokana an'ny Terrans na ny Zergs ao amin'ny Starcraft II aza izy ireo dia mila fotoana kely ianao hanatonana ny tenanao amin'izy ireo.
Ianao koa dia manana hery samihafa eo am-pelatananao azonao ampiasaina sy fanavaozana ny tranonao sy ny tafinao. Ireo mpamorona dia manana maodely marobe ho an'ny multiplayer nomanina ho an'ny ho avy ary tonian-dahatsoratra ambaratonga izay afaka mitondra fiainana be dia be amin'ny lalao. Amin'izany dia afaka mamorona planeta anao ianao mba hahafahanao sy ny hafa milalao azy ireo. Ao amin'ny RTS dia ilaina ny multiplayer mba hanitarana ny androm-piainany, satria i AI dia azo dinihina amin'ny farany ary hainy ny fomba hiatrehana azy.
Manana tontolo 5 samihafa ianao, planeta mihoatra ny 50 handresy, ambaratongam-pahasarotana dimy isaky ny haavo ary fanavaozana maharitra efatra. Manolotra safidy maodely havia sy safidy ambany-kisary ho an'ny fitaovana tsy manana fitaovana enti-manana lehibe ahazoana tombony betsaka amin'izany.
NeoWars dia azo alaina maimaimpoana avy amin'ny Play Store ary manana micropayments mazava ho azy. Ny iray amin'ireo mampiavaka azy dia raha mahita horonantsary ampy amin'ny fampiharana mitovy ianao, hamaha ny lalao iray manontolo ianao, noho izany aza milavo lefona amin'ity lafiny ity satria hitondra RTS tsara ho an'ny finday Android ianao.
NeoWars dia mifototra amin'ny sary izay ny vector no fiteny famolavolana ary ny lokony fisaka miampy ireo aloka noforonin'ny jiro dia mitarika antsika amin'ny ambaratonga tsara amin'ity fizarana teknika ity. Amin'ny maha-RT azy dia misy vokany tsara efa vita toa ny varatra avy amin'ny node sy ny fipoahana sasany. Vita tsara ny tontolo iainana ary amin'ny ankapobeny dia misy fivoarana lehibe izany.
Safidy ambany profil
Tsy mbola manana multiplayer izany
Neo Wars tetika habakabaka RTS
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » NeoWars dia manolotra RTS miorina amin'ny node izay tsy maintsy handresena ireo planeta